🥇 ▷ Kadib dhammaan qalabka 'Redmi' & # 039; s Camera Note 8 sidoo kale waa mid cajiib ah! ✅
Kadib dhammaan qalabka ‘Redmi’ & # 039; s Camera Note 8 sidoo kale waa mid cajiib ah!
Shirkadda Subia brand ee ‘Xiaomi’s Redmi’ waxay diyaar u tahay inay soo saarto taleefannadeeda casriga ah ee jiilka cusub. Waxaan ka hadleynaa Redmi Note 8 iyo Redmi Note 8 Pro. Ka dib markii la wadaagay qaar ka mid ah saamiyada kaamirada Redmi Note 8 Pro, maamulaha shirkaddu wuxuu muujiyey sida Redmi u shaqeyso note 8 at Weibo.
Kadib dhammaan kaamirada ‘Redmi’s Camera Note’ 8 ayaa sidoo kale soo jiitay. Bal eeg sababta!
Saamiyada kamaradaha ee casriga casriga ah ee Redmi Note 8 waxay muujinayaan awoodaha markay tooganayaan iftiin yar. Intaa waxaa u dheer, waxay sidoo kale xaqiijisay in aaladdaani ay ku lahaan doonto 48 MP dareeme aasaasaha afarta qaabeynta kamaradaha.
Labada muuqaal ee ay wadaageen Lu Weibing, mid waxaa lagu qabtay qaab Super Night, halka kan kalena lagu qabtay isagoo leh ‘Long Exvidence’.
Si kastaba ha noqotee Weibing ayaa sidoo kale sheeganeysa in aaladdaani ay bixiso khibrad sawir oo maalinle ah oo wanaagsan. Markaad eegto muunadaha kaamirooyinka, runti waxay umuuqataa inay tahay xarig adag.
Shirkadani waxay dhowaan xaqiijisay faahfaahinta kamaradaha casriga casriga ah ee Redmi Note 8. 48-ka xaraf ee weyn ee dareeraha ‘camera’ wuxuu ku biiraa xagal kale oo ballaaran. Waxaan sidoo kale leenahay dareeme qoto dheer iyo kamarado macro weyn ah. Markaa waxaan bartay in kaameeraha afaraad uusan ahayn qalabka loo yaqaan ‘ToF sensor’.
Si kastaba ha noqotee waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in taleefankan casriga ahi la imaan doono nashqad kamarad ka duwan kan Pro ee lagu arko sawirka kore. In kasta oo dareemayaasha kaamirooyinka ee Pro kala-duwanaanta ay si toosan isugu toosan yihiin loona meeleeyay booska xarunta dhexe, dareemayaasha kaamirada ee toosan ee kujira Redmi Note 8 ayaa la dhigayaa booska bidix ee kore.
Meesha dhexe ee sare waxaa ku jira dareeme faraha. Waxaa la xaqiijiyay in taleefanka casriga ah uu ku shaqeyn doono kombiyuutarka ‘Snapdragon 665 chipset’. Muuqaalka ayaa sidoo kale u muuqda inuu soo jeedinayo in casriga casriga ah laga heli doono midab kala duwan midab u leh buluug cad oo kala duwan.
Iyada oo ay weheliso telefoonada casriga ah ee Redmi Note 8 iyo Note 8 Pro, shirkaddu waxay sidoo kale bilaabi doontaa telefishanka 70mi inji ee Redmi. Waqtigan xaadirka ah, si aan wax uga ogaanno qiimaha iyo faahfaahinta helitaanka taleefanka casriga, waa inaan sugnaa dhowr maalmood.
New Redmi note 7 ayaa kudhowaad bambo u ah lacag yar